अन्तराष्ट्रिय Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बाँके दुर्घटनाका मृतक र घाइतेको कोरोना परीक्षण गरिने
बाँके बस दुर्घटना : मृतकको संख्या १२ पुग्यो
‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी’बारे शिक्षामन्त्री अनभिज्ञ !
कोरोना सङ्क्रमितलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय
कोरोना सङ्क्रमित ठाउँ तत्काल सिल गरौं : नेता शाही
रमजान समय तालिका २०१९: दिनमा कति घण्टा उपहास ?
काठमाडौँ । मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान(रमदान) मंगलबारबाट शुरु भएको छ । ७ मे बाट शुरु भएको रमजान एक महिनासम्म चल्नेछ । रमजान महिना मुसलमानका लागि शुभ-लाभको महिना हो । रमजानमा इस्लाम धर्माव...
नेपाल र भियतनामबीच १६ बुँदे सहमति
काठमाडौं । भियतनाम भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले शनिबार भियतनामका समकक्षी ग्युगन सुआन फुकसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्तापछि नेपाल र भियतनामका अधिकारीबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । ...
पाकिस्तानको पाँच तारे होटलमा आक्रमण
एजेन्सी । पाकिस्तानको बलूचिस्तान प्रान्तको ग्वादर शहरको पाँच तारे पर्ल कन्टिनेन्टल( Pearl Continental) होटलमा बन्दुकधारीले हमला गरेका छन् । पाकिस्तानी अधिकारीले यसबारे पुष्टि गरेका हुन् । तीन...
छुद्रग्रहलाई ठक्कर दिनका लागि नासाले एक अन्तरिक्षयान पठाउँदै !
शनिबार, बैशाख २८, २०७६
एजेन्सी । पृथ्वीको रक्षा प्रणाली जोखिममा रहेको सुचनाहरु नासाले पटकपटक सार्वजनिक गरिरहन्छ । यसैबीच नासाले पहिलोपटक एक अन्तरिक्षयान लन्च गर्दै छ, जो सन् २०२२ मा एक छुद्रग्रहसँग गएर ठोक्किने छ । अमेरिक...
उडिरहेको विमानबाट आत्महत्याको प्रयास
न्युवोर्क । अमेरिकामा एक महिलाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको विमानबाट आत्महत्याको प्रयास गरेकी छन् । आर डी यु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट न्यु वोर्क तर्फ गइरहेको डेल्टा ५९३५ नम्बरको विमानमा सवार स...
आठ गोल गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिप्लिएर लडे
एजेन्सी । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आइस हकीको प्रदर्शनी खेल सकिएपछि जितको खुसीयालीमा मैदान घुम्दै थिए। अकस्मात चिप्लिएर लडे। टेलिभिजनबाट समेत प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यस मैत्रीपूर्ण आइस हकी ख...
अमेरिका–चीनबीच जारी व्यापार वार्तामा सहमति हुन् सकेन, विश्व बजारमा असर देखिने
एजेन्सी । चिनियाँ निर्यातमाथि नयाँ भन्सार हटाउने विषयलाई केन्द्रमा राखिएर शुक्रबार विहान अमेरिकी र चिनियाँ सरकार बीच भएको वार्ता सहमति बिना सकिएको छ । यस वार्ताले एक प्रकारको सहमति जुट्ने र थप भ...
भूमध्यसागरमा डुङ्गा पल्टिँदा ६५ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । आप्रवासी बोकेको एक डुङ्गा भूमध्यसागरमा पल्टिँदा ६५ को मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रको शरणार्थी एजेन्सी(युएनएचसीआर)का अनुसार सो डुङ्गा अफ्रिकी मुलुक ट्युनिसिया नजिकैको सामुन्द्रिक तटमा ...
अमेरिकाले लियो उत्तर कोरियाली जहाज नियन्त्रणमा
एजेन्सी । अमेरिकाले उत्तर कोरियाको एक मालबाहक समुद्री कार्गो जहाज नियन्त्रणमा लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा कोइला बोक्न प्रयोग गरिँदै आएको 'वाइज अनेष्ट' नामको कोरियाली समुद्री जह...
ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति टेमेअरले गरे आत्मसमर्पण
एजेन्सी । भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति मिसेल टेमेअरले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। प्रहरीले उनलाई साओ पाउलोस्थित संघीय प्रहरीको हिरासतमा राखेको छ। पूर्वराष्ट्रपति टेमेअ...
बैठक बस्नुअघि चीन–अमेरिकाबीच ठाकठुक
एजेन्सी । गत वर्षको जुलाई देखि शुरु भएको अमेरिका- चीन व्यापारयुद्ध समाप्त नहुने छाँटकाँट देखिएको छ । दुई देशबीच चलिरहेको व्यापारयुद्ध समाप्त गर्ने उद्देश्यसहित दुई देशका प्रतिनिधि शुक्रबार एउटा मञ्च...
अमेरिका र इरान सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
एजेन्सी । इरान र अमेरिकाबीचको शत्रुता एक पटक पुनः सतहमा आएको छ । अमेरिकाले इरानमाथि चौतर्फी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ । यसले इरानको अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ । अमेरिकाल...
एउटै घरमा भेटियो हजारभन्दा बढी हातहतियार
लस एन्जेल्स । अमेरिकाको लस एन्जेल्स सहरको धनाढ्यहरुको वस्तीको एक घरमा हजारभन्दा बढी हातहतियार र बन्दुक भेटिएको छ । गैरकानुनी रुपमा हातहतियार निर्माण तथा बिक्री भइरहेको आशंकामा प्रहरीले छापा मार्दा स...
५० दरका ४६ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर कागजमा बदलियो !
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियामा लाखौँको संख्यामा निकालिएको ५० दरका अष्ट्रेलियन डलरलाई देशको केन्द्रिय बैंकले रोक लगाएको छ । भर्खरै छापिएको ४६ मिलियन अष्ट्रेलियन डलरमा अकल्पनीय टाइपोग्राफिकल त्रुटि भेटीएपछ...
जिउँदो अक्टोपसलाई खान खोज्दा भयो यस्तो दुर्घटना
एजेन्सी । सि–साइड गर्ल लिटल सेभेन नामबाट ब्लग लाइभ स्ट्रिम गर्ने एक चीनीयाँ युवती सी-फूडको मज्जा लिइरहेको थुप्रै भिडियो पोष्ट गरिरहन्छिन् । भोको जस्तो देखिने, र सामुन्दिक खाना खोज्दै हिड्ने । ...
परमाणु सम्झौतामा इरानद्वारा युरोपेली देशलाई चेतावनी, दियो ६० दिनको ‘अल्टिमेटम’
एजेन्सी । इरानले युरोपेली देशलाई ६० दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिँदै अमेरिकाको तर्फबाट लगाएको प्रतिबन्धबाट आफूलाई बचाउनका लागि ठोस् कदम उठाउन भनेको छ । यसका साथै उनले यस्तो नभए आफूहरु युरेनियमको उत्पा...
‘तहरीक-ए-इन्साफ’ पाकिस्तानको सबैभन्दा धनी राजनीतिक पार्टी
बुधबार, बैशाख २५, २०७६
एजेन्सी । प्रधानमन्त्री इमारन खानको पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी देशको सबैभन्दा धनी राजनीतिक पार्टी हो । पाकिस्तान को शिर्ष निर्वाचन निकायको अनुसार उक्त पार्टीको सम्पति करिब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ ...
८७ किलोमिटर प्रतिघन्टाको हुरीले ओढाईदियो अष्ट्रेलियालाई धुलोको ब्ल्याङकेट
अष्ट्रेलिया। मंगलवार बिहान देशको उत्तर-पश्चिम स्थित विक्टोरियन शहरको मिलदुरा प्रान्तले धुलोको ब्ल्याङकेट ओढेको छ । धुलो आए सँगै मिलदुरामा दिउँसै रात परेको थियो । मिलादुरा एयरपोर्टमा उडान भर्न ठिक्क प...
बेलायतको दरबारमा सुनको ट्वाइलेट
एजेन्सी । युनेस्कोले विश्व सम्पदाको सूचीमा राखेको बेलायतको सबैभन्दा ठूलो दरबार ब्लेनहिम(Blenheim Palace)मा सुनबाट बनेको ट्वाइलेटको सिट लगाइने भएको छ । यो ट्वाइलेटको सिट कभर त्यहाँ लाग्ने बताइए...
डाटा दरबारमा विस्फोट, ८ जनाको मृत्यु, २५ घाइते
लाहोर । लाहोरको पवित्र धार्मिक स्थान डाटा दरबार नजिकै बम विस्फोट हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन् । बुधबार डाटा दरबारको २ नम्बर गेट नजिकै पुलिसको गाडीलाई निशाना बनाएर उक्त विस्फोट...
हाम्रो देशको करिब ७०% युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशमा रहेको कुरा तथ्याङ्कले देखाउ...